Mamoaka lahatsoratra ho fanandrata-teny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2019 3:50 GMT
Faly izahay mamoaka ny Advocacy 2.0 Guide: Cross-posting for Advocacy, Fampahafantarana ny Fampidirana Mahomby ny Media Sosialy. [Torolalana Advocacy 2.0: lahatsoratra miara-mivoaka hanaovana fanandrata-teny] Manolotra fampidiran-dresaka fohy mikasika ny fomba fampiasana ny famoahana lahatsoratra iray mivoaka indray miaraka amin'ny sehatra vitsivitsy hanaovana fanentanana antserasera momba ny fiarovana (= fanandrata-teny) ity torolàlana ity. Mampitamberina ireo fitaovana web 2.0 isankarazany izy, mampiseho ohatra mahomby tamin'ny fampiasana ny famoahana indray mivoaka amin'ny habaka samihafa ho fiarovana. Ahitana tombontsoa sy voka-dratsy amin'ny teknika fivoahan-dahatsoratra amin'ny sehatra samihafa ihany koa torolàlana.
Trohy amin'ny endrika PDF azafady ny torolalana ary ampio izahay handika izany amin'ny fiteninao
Geo-bombing: YouTube + Google Earth [mg] Iray amin'ireo teknika azo ampiasaina mba ahafahana manao fanapariahana mahomby kokoa ny fanentanana an-dahatsary ataonao amin'ny YouTube amin'ny alàlan'ny fampiharana fandraketana an-tsarintany Google tahaka ny Google Maps sy Google Earth ny geo-bombing. Azonao atao ankehitriny ny mijery ny lahatsarinao voafangitra ara-jeografika (geotag) ao anatin'ny Google Earth sy Google Maps. Hiseho ny lahatsary YouTube rehetra misy famantarana ara-jeografika rehefa mihodina ny tontolon'ny Google Earth / Maps [vakio bebe kokoa amin'ny teny malagasy …]